Bentley Map, filashadayda loogu talagalay Wadajirka - Geofumadas
Waxaan ku soo dhawaaday martiqaad aan uga qayb galo wadajirka, dhacdo in ay soo baxdo filashooyin xiiso leh, ka dibna waxay u muuqataa in dhibaatada dhaqaale la dejiyay, waana inaan dib u soo celinnaa fursadaha.
Kuwa ugu fiican
Iyadoo dhibaatooyinka caalamiga ah, sannadkii hore Bentley ayaa bilaabay inuu siminaarada internetka oo waxay u tagtay dhammaadka Dhiibo. Ma ahan fikrad xun, laakiin marka la eego waxaad waayeysaa xidhiidhka aad la leedahay shirkadda, markaad eegto dhamaadka mawduucyada gaarka ah ee uusan ku sheegin sheekadiisa. Xasuuso in munaasabadaha sannadlaha ah aysan ahayn kaliya inay muujiyaan wararka, laakiin kor u qaadida koritaanka astaanta. Xaaladda Nidaamka Macluumaadka Juqraafiyeed, ma shaqeyneyso gadashada barnaamijka internetka, sababtoo ah hirgelinta, tababarka iyo taageeradu waa dhinacyo ay shirkaduhu leeyihiin inay tilmaamaan heerarka kalsoonida iyo waxqabadka. Xilliyaddan isku xirnaanta, xidhiidhada lagu dhisay dhacdooyinka, xiriirka la helay ka dib marka dib loo eego barta iyo aqoonta la xiriirta bulshooyinka internetka ama shabakadaha bulshada, waxay u muuqataa inay shaqeyneyso.
Waxaa jira dhammaan siminaarada internetka, oo cajiib ah oo la arki karo wakhti kasta, laakin marka la eego waxaa la ogaadey in kuwa naga mid ah oo ka qayb galaya dhacdo ay la socdaan waxyaabaha laga filayo, shaki iyo isku kalsoonaanta aan hubeyno inay ka soo baxayaan afarta maalmood ee dhacdada . Iyadoo laga jawaabayo suurtagalnimada wixii ay ka soo heleen waayo-aragnimadooda, Wadajirka ayaa la bilaabi doonaa, oo ay dadka isticmaala beelaha codsaday:
Hagayaasha wax soo saarka ee interactive
Shirarka iyo dibad-baxyo nool
Miisaska wareega iyo mawduucyada mawduucyada
Wax kasta, oo aan la qaban karin sannadkii hore, oo ay arkeen wejiyada.
Si aad uga qayb qaadato mashaariicda qaarkood ee la xidhiidha ESRI, Manifold iyo Bantley Map, waxaan haystaa su'aalo taxane ah oo aan rajeynayo inaan xalliyo. Asaasiga ah ee ku saabsan wadashaqeyntu, wfs iyo sababaha aan u shaqeyneynin, laakiin xooggeyga ayaa ku jira su'aashan:
Haddii aan ahay user ah Microstation, aad ayaana ugu faraxsanahay ka version SE ah, waxaan fahmi karaan uurkujirtii of Geographics iyo GeoWeb Publisher, Sidee waxaa suurtagal ah in igu kici aad u badan si ay u fahmaan habka qulqulaan Bentley Map?
Mararka kale marxaladayda ayaa waxay la socotay Suuq-geynta Gobollada, kiiskan waxaan daneynayaa kaliya farsamada kaliya wadahadal fudud:
-Waxaa la socda, waa mashruucan, ma doonayo inaan isticmaalo Publisher GeoWeb ama Fikradda mashruuca, kaliya PowerMap:
Waxaan rabaa inaan xoqdo, si ay u abuuraan nidaam xfm ah, oo leh saddexdan qaybood: Cadastre, Order, Cartography
-In lakabyada cadastoolka waxaan doonayaa inaan abuuro lakab la yiraahdo Parcels
- Waxaan rabaa inaan ku daro afar sifo: furaha cadawga, xaaladda canshuuraha, aagga iyo sawirka
-Haddaba waxaan rabaa inaan furaha saaro maaskaro, xaaladda canshuurta ee ku salaysan barta Boolean, meesha ku salaysan xisaabin firfircoon, sawir ku saleysan hyperlink.
-Dhulka lakabyada cadastoolka waxaan doonayaa in aan abuuro qalliin kaas oo igu kicin doona guddi si aan u keydiyo xogta, iyo sidoo kale ii ogolow. Sidoo kale ku samee xiriirka miiska Access, halkaas oo furahaaga cadiga ah ee la wadaago.
- Markaa waxaan rabaa inaan abuuro qof isticmaala magaca Catastro, taas oo qaadata tayadaas oo eegaysa geedkii Maamulaha.
Waxaan isku dayay, laakiin waxaan rabaa inaan arko xoqan, sababtoo ah waxaa jira waxyaabo ka mid ah socodka aan ka shaqeynin hal istaroogga, labaad labaad, iyo mararka qaar waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad. Waxaa laga yaabaa in ay tahay wax la yaab leh, laakiin haddii aan fahmi karo, waan ku faraxsanahay aniguna waxaan awoodi doonaa inaan dhameystirno inta kale ee ku salaysan tusaalaha.
Taas ka dib, waxaan tagaa su'aasha xigta:
Maxay tahay sababta aysan jirin wax macallimiin ah oo sharraxaad ka bixinaya si dadka caadiga ah ay u arkaan in Bentley Map aysan ku jirin dhinaca kale ee qorraxda?
Wax kasta oo dhacaya, waxaan rajeynayaa inaan jawaabaha u soo diro blogka, kuwa ku xanuunsanaya rigoorada isku midka ah ama ay ka filanayaan noocan software.
17 ilaa 20 ee May 2010
In Philalphia, Pennsylvania
Halkan ayaad raaci kartaa on Facebook
Post Previous«Previous Bentley Map Waxay noqon kartaa mid aad u adag?
Post Next Qalad qaldan, Bentley V8iNext »